Momba anay | Anping County Kaixuan Stainless Steel Products Co., Ltd.
Torolàlana ho an'ny orinasa
Fittings misy kofehy
Tube Barb Fittings
Valin'ny baolina 1PC
Valin'ny Ball 2PC
Valin'ny Ball 3PC
Ball Valves miaraka amina mounting pad
2PC Valve Ball miaraka amin'ny Pading Mounting
Valve Mini Ball
Valin'ny Ball PEX
KX Co. (Anping KaiXuan vokatra vy tsy miovaova co., Ltd.) Niorina tamin'ny 2002.
Ankehitriny ny orinasa dia mampifangaro ny fanodinana famolavolana famolavolana sy ny varotra varotra, manokana amin'ny famokarana valves vy tsy misy fangarony, fantsom-by, fittings press, ary fanariana fanao manokana isan-karazany.
Fahaleovan-tena sy fanavaozana
Izy io dia manana ivon-toerana famolavolana matihanina sy foibe serivisy teknika hanomezana antoka antoka momba ny kalitaon'ny vokatra sy ny traikefan'ny mpanjifa.
Ny fahaiza-mamokatra isam-bolana dia 100 taonina. Manana karazana fitaovana bobongolo SP114 sy fitaovana bobongolo ISO4144, sns isika. Ny bobongolo tena mandeha ho azy tanteraka dia manana famokarana 3 000 faritra amin'ny savoka, izay avo telo heny noho ny bobongolo-tànana.
Fitaovana fanaraha-maso matihanina
Fitaovana fitaovana fanadinana fitaovana matihanina - spectrometer.
Ny fitaovana manta dia hosedraina alohan'ny fandefasana azy ary aorian'ny fandefasana azy mba hanomezana antoka ny tahan'ny 100% mahafeno fepetra ary mahafeno ny fenitra takian'ny mpanjifa.
Ireto misy andiam-lathes milina CNC 35, milina fanoratana 2, fitaovana fandrefesana zoro kambana, milina fanangonana valizy mandeha ho azy ary fitaovana matihanina hafa. Mampiasa fitaovana fandrefesana kofehy izahay, marika OSG Japoney sy marika JBO Eoropeana hizaha toetra ny kofehy mifanaraka amin'ny takian'ny mpanjifa.
Ekipa QC matihanina dia hizaha toetra ny lafiny rehetra, ny fitsaboana amin'ny tany, ny lesoka ateraky ny fikorontanana mahery setra sns. Mandritra izany fotoana izany, mans mpiasa matihanina manapaka sy mitoto volo, fitaovana fanandramana fanerena matihanina manana fifehezana tsara amin'ny tsindry rano sy ny fanaraha-maso ny tsindry rivotra mandritra ny fanaraha-maso ny vokatra.
Manana ny fomba fiarovana sy fiarovana ny tontolo iainana feno ny rafitra fanondranana.
Amin'ny alàlan'ny tranonkala ofisialy, Alibaba, Facebook, Linkedin, Google, ary fantsona hafa, dia tambajotra mivarotra matanjaka.
Androany, namidy tany Japon, Eropa, Amerika, sns ny vokatray, firenena 21 sy faritra erak'izao tontolo izao.
Nampiasaina be dia be tamin'ny indostria 16 mamorona laza tsara ho an'ny mpampiasa izany.
Ny orinasanay dia manarona faritra 20000 metatra toradroa.
Atrikasa fanariana 5000 metatra toradroa.
Fampandehanana milina 5000 metatra toradroa.
Fitaovana fanaraha-maso matihanina, ekipa teknika za-draharaha, fanohanana famokarana matanjaka, KX (KaiXuan), ny safidinao kalitao.
Sales Dept ： + 86-318-7532676
Production Dept ： + 86-318-8095396
Ny fanariana fampiasam-bola dia antsoina koa hoe fanariana savoka na fanariana marina, izay metaly mamorona metaly hamokarana faritra misy fandeferana tery, lava-kazo anatiny ary refy marina ....
1. Fahadiovana tsara amin'ny fantsom-by vy sy fittings rehetra Fantatry ny rehetra fa ny vy vy dia fitaovana ara-pahasalamana ekena azo atsofoka ao amin'ny vatan'olombelona ....
01 Fitaovana fantsom-boaloboka milanja tsy misy fangarony: 1. Ny tampon'ny kofehy dia tokony ho maranitra, eny fa na dia ny pitch aza ary toa mamiratra. 2. Ny tendrony kofehy dia azo kitihina amin'ny tanany, ...
© Copyright - 2019-2020: Anping County Kaixuan Stainless Steel Products Co., Ltd. Zo rehetra voatokana.